That's so good, right?: November 2015
'တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းတက်နေတဲ့ အချိန်များဟာ ဘ၀ရဲ့ အ ကောင်းဆုံး နှစ်ကာလများဖြစ်သည်'
အဲဒါလုံးဝမဟုတ်ဘူး။ သူတို့တွေလိမ်နေတာ။ အဲဒီစကားပြောသူတွေအားလုံး လိမ်ညာနေကြတာ။ အနည်းဆုံးတော့ ကျွန်တော့်အတွက် သူတို့တွေပြောသလို အကောင်းဆုံး အချိန် ကာလတွေ မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ ဆယ်ကျော်သက်သွေးသား ပြောင်းလဲလာစကတည်းက ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပုံမှန်မဟုတ်သလို ခံစား ခဲ့ရတယ်။ စကားအပြောအဆို ညင်သာနုညံ့တာ၊ အသွား အလာလှုပ်ရှားမှုမှာ သိမ်မွေ့နေခဲ့တာ၊ သူများတွေရန်စကား ဆိုရင်တောင် ဒေါသမထွက်တတ်ခဲ့တာတွေလေ။ အပြင်ထွက်လို့ လူတွေအကြည့် ကျွန်တော့်ဆီရောက်လာရင်ပဲ အလိုလို ကြောက်လန့်နေရော။ ညတိုင်းအိပ်ချိန်တွေရောက်တိုင်း ကိုယ့် အဖြစ်ကိုတွေးရင်း ငိုကြွေးခဲ့ရတယ် အမြဲတမ်း။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကြောက်လန့်ပြီး လူတော မတိုးတဲ့စိတ်တွေနဲ့ နောက်နေ့မှာ မရှင်သန်ဖို့ ဆုတောင်းရင်း အိပ်စက်ခဲ့ရတာ။
ကျွန်တော့်မိဘတွေက အရမ်းစိုးရိမ်ခဲ့ရတယ် ကျွန်တော့်ရှေ့ရေး အတွက်။ လူတွေကို ရင်မဆိုင်ရဲတဲ့ကိစ္စ၊ ရှက်ကြောက်နေတဲ့ ကိစ္စတွေ အတွက် သူတို့အတတ်နိုင်ဆုံးနည်းလမ်းတွေပေး ဖြေရှင်းပေးခဲ့ကြတယ်။ ဒါကြောင့်ပြောတာ..... တက္ကသိုလ် ၀င်တန်းကာလများဟာ ကျွန်တော့်အတွက်အကောင်းဆုံး မဟုတ် အခက်အခဲဆုံးကာလများဖြစ်တယ်ဆိုတာ။ ကျွန်တော့်မှာ သူငယ်ချင်းမရှိဘူး။ ဟုတ်တယ်... တစ်ယောက် မှကို မရှိတာပါ။ သူတို့အားလုံး ကျွန်တော့်ဆို အစွန့်ပစ်ခံ ပစ္စည်းတစ်ခု အဖြစ်သာယူဆကြတယ်။ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းက ကျော်ဖြတ်ချင်လှပြီ။
တက္ကသိုလ်ကို သြဂုတ်လ ၁၂ရက်နေ့မှာ စတင်တက်ရောက် ခွင့်ရခဲ့တယ်။ အဲဒီ့နေ့ဟာ ကျွန်တော့်ဘ၀အတွက် လွတ်လပ် ရေးနေ့ပေါ့။ အထက်တန်းကျောင်းက ပေးခဲ့တဲ့အကျင့်ဆိုးတွေ အားလုံးကနေ လွတ်မြောက်ခြင်းလေ။ ဒါဟာ ကျွန်တော့် ဘ၀ သစ်တစ်ခုအတွက် အစပျိုးနေခြင်းဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့။ ကျွန်တော့် လျှို့ဝှက်ခံစားမှုတွေကို ဘယ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ပြောပြဖို့ ခဲယဉ်းပါပြီ။ အခန်းဖော်က အတော်ကြင်နာတတ်တဲ့သူတစ်ဦး ပါ။ သူ့နာမည်က 'ညီညီ'။ အားကစား ကြယ်ပွင့်တစ်ပွင့်ဖြစ်ပြီး အမြဲတစေ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူဖြစ် ပါတယ်။ ညီညီ က အားကစား မျိုးစုံကို အကျွမ်းတ၀င်ရှိလှသူပါ။ ဒါပေမဲ့ အဓိက အားသန်တာက ဘောလုံးကန်ခြင်းပြုတဲ့ ဘောလုံးသမား ဘ၀။ အဆောင်မှာရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့အခန်းရဲ့ သူ့ဖက်ခြမ်းမှာဆိုရင် နံရံမှာ David Beckham ရဲ့ပိုစတာတွေ၊ ပြီးတော့ သူငယ်စဉ်က ရရှိ ခဲ့တဲ့ အောင်ပွဲရပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ ပြင်ဆင်ထားတာ။ အားကစားသမား ညီညီဟာ ကျောင်းမှာဆို နောက်နှစ်တွေ အ တွက် ပညာသင်ဆု တောင်ရရှိထားပါပကော။
အတန်းချိန်တွေဟာ အထက်တန်းကျောင်းမှာတုန်းက အတန်း ချိန်တွေနှင့် ကွာမှကွာ။ multiple choice test တွေအမြဲဖြေနေ ရတာမျိုး မရှိတော့ဘူး။ အစဦးကာလတွေမှာ စိုးရိမ်နှုနည်းနည်း ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ နောက်တော့လည်း ပုံမှန်လည်ပတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သွား ရော တက္ကသိုလ် ဘ၀မှာ။ မနက်စောစော အိပ်ယာထတယ် စား နေကျ ကဆိုင်ကိုသွား မနက်စာစားပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ မနက်စောစော အတန်းချိန် တစ်ခုခုကို မှီအောင်တက်တယ် English ဒါမှမဟုတ် Math။ အတန်းချိန်ပြီးရင်တော့ နေ့လယ် စာစား နောက်တော့ စာကြည့်တိုက် ကိုသွား တခြားလေ့လာစရာ တွေ ဒါမှမဟုတ် ကျောင်းကစာတွေကို ထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာ ဖတ်ရှုဖြစ်ပါရဲ့။ နောက်တစ်နာရီလောက် မှာတော့ ကျွန်တော် အလွန်သဘောကျတဲ့ biology နှင့် chemistry လို သိပ္ပံချိန်တစ် ခုခုကို တက်ပါတယ်။ အတန်းချိန်တွေ အားလုံး ပြီးရင်တော့ ကွန်းခိုရာ အဆောင်ဘက်ကို ပြန် ညမှာ ကျက်မှတ်လေ့လာဖို့ ပြင်ပေါ့။ ကျောင်းသားကောင်းတစ်ယောက်ဟာ ဘာသာရပ် တစ်ခုအတွက် အချိန်နှစ်နာရီပေးလေ့လာသင့်တယ်လို့ ဒယ်ဒီ ပြောဖူးတယ်။ ကျွန်တော် တစ်ညကို ရှစ်နာရီထက်မနည်း စာကြည့်ချိန် ယူပါတယ်။ အဲဒီ လောက်အချိန်ယူတော့ အိပ်ရေး ပျက်မယ်ထင်လား ကျွန်တော်က အဲဒီ့ကိစ္စကို ကောင်းကောင်း ကိုင်တွယ် နိုင်တာပေါ့။ လေ့လာကျက် မှတ်ရတာ ကျွန်တော့် ၀ါသနာ။
ညီညီ့ နေ့စဉ်လည်ပတ်နေထိုင်မှုတွေကို သတိထားကြည့်မိ တော့ အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းအောင် အားကစားလှုပ်ရှားမှုတွေ နှင့်ပြည့် နှက်နေတာပါပဲ။ မနက်တိုင်း ၅နာရီဆိုထပြီ။ အဲဒါ ကျွန်တော့်အတွက် ရန်သူပဲဗျ သူ့နှိုးစက်မြည်သံကြောင့် အမြဲ လန့်နိုးရတာ။ တစ် နာရီလောက် မှာ ၀ိတ်မတယ်၊ ပြီးရင် ၅မိုင် လောက် ရွရွပြေးပါလိမ့်မယ် ပုံမှန်။ အတန်းချိန်တော့ ပုံမှန်တက် ပါတယ်။ ကျွန်တော် အ ဆောင်ပြန်မရောက်ခင် သူအရင်ရောက် နှင့်နေတတ်တယ်။ ကိရိယာလွတ် လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရင်း ရေချိုးဖို့ပြင်ဆင်ရင်းလေ။
သူ့အတွက်တော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်မဖြစ်နိုင်ဘူး လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထင်တာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့က လုံးဝကို ဆန့်ကျင် ဘက်။ သူကတက်ကြွဖျတ်လတ် အပေါင်းအသင်းမင် သလောက် ကျွန်တော်က အိမ်ပြန် စာအုပ်ကိုင် ငြိမ်ငြိမ်နေဆိုတဲ့ လူမျိုးဆိုတော့ လေ။ အပေါင်းအသင်းထားဖို့ ကျွန်တော် စိတ် မရှည်သလို သူတို့ကလည်း ကျွန်တော့်အပေါ် စိတ်မရှည် လောက်ပါ။ ဒီလိုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေ ပေမဲ့ သူက အရမ်း ကြင်နာတတ်သူ အကူအညီလိုရင် အဆင်ပြေတတ်စေသူ တစ်ဦး။ ကျွန်တော်တို့ ကြားခံ ဆက်သွယ်ရေးကတော့ အများ သား။ အပြင်တစ်ယောက်ယောက် ထွက်ရင် notepad မှာ တစ်ခုခုရေးပြီး အသိပေးထားတတ်တာ ပုံမှန်။
သောကြာနေ့ည တစ်ရက် ညီညီ့ကို မနက်ဖြန် ဘာတွေ လုပ်စရာရှိလည်း မေးမိပြောမိပါရော။ 'မနက်ခင်းတိုင်း ငါ လုပ်နေကျ အလုပ် တွေပဲလုပ်ဖြစ်မယ် အစောပိုင်းတော့။ ဘော်ဒါတွေနဲ့ နေ့လယ်ကျရင် ဘောလုံးကန်ဖြစ်မလား မသိဘူးကွ။ မင်းဘာလုပ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိလို့လဲ?'
'Umm...မသေချာပါဘူးကွာ။ တနေကုန်စာလုပ်ဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်မယ် ကင်မရာကိုင်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာရေးလည်း ထွက်ဖြစ် ချင်ဖြစ်မယ်'
'အာ...မင်း ငါနဲ့လိုက်သင့်တယ်....တစ်ရက်လောက် ပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင်ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နေစမ်းပါဦးကွာ'
ကျွန်တော် သူ့အပြောမှာ သဘောကျစွာပြုံးမိရင်း သဘောတူ လိုက်ပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာ ခုတင်ကြီးလှုပ်နေတာ နှင့်အတူ ညီညီရဲ့ 'ဟေး ငါ့ကောင် ထတော့လေကွာ' ဆိုတဲ့ အသံကြောင့် နိုးလာရပါ့။ မျက်လွှာပင့်ကြည့်လိုက်တော့ သူက အားလုံး အဆင်သင့် ဖြစ် နေပြီ။ အချိန်က ၅နာရီ ၁၀မိနစ်ဆို တော့ အမြန်ဆုံး ပြင်ဆင်ရတော့တာပေါ့။နှစ်ယောက်သား ဘေး ခြင်းယှဉ်လျှောက်ကာ Gym ကိုသွား ကြတယ်။ သူမနက်တိုင်း မနေကျ ၀ိတ်လေ့ကျင့်ခန်းများကို ပြောပြပြီး ကစားပါရဲ့။ နောက်တော့ စိမ်းစိုတဲ့ တောလမ်း တလျှောက်အပြေး လေ့ကျင့် ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်ကို တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် ပြေးခိုင်း ရင်း။ ငါးမိုင်ဆိုတာ ကျွန်တော့်အတွက် တကယ့် ထရိန်နင်ပါပဲ။ အဆောင်ပြန်ပြီး အိပ်ပစ်ချင်မိတာမှ အရမ်း။ ဒါပေမဲ့ ညီညီနှင့် အတူရှိရတာ နောက်ပြီး သူ့ဘော်ဒါတွေနှင့် ဘောလုံးကန်သွား ကြဦးမှာ ဆိုတော့ သူနှင့်အတူ လိုက်သွားဖို့ ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ် လိုက်ပါတယ်။
တစ်နေကုန် ဘောလုံးကစားနေကြတာ ကျွန်တော့်အတွက် တ ကယ်ဖားတာပဲ။ နေလုံးကြီးလည်း အနောက်အရပ်ကို ရွေ့တော့ ညီညီနှင့် ကျွန်တော် အဆောင်ပြန်ပြီး relax ပေါ့။ အိပ်ယာပေါ် ခြေကားယားလက်ကားယား လှဲနေလိုက်တာ ခဏနေတော့ အိပ်မောကျသွားရပါရဲ့။
ဒီလိုနဲ့တစ်လလောက်ကြာတော့ ညီညီနဲ့ ကျွန်တော် ရင်းနှီး ခင်မင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာပါရော။ မနက်ခင်းတိုင်း သူ အားကစား လုပ်တိုင်း ကျွန်တော်လည်း လိုက်ပါလုပ်ဆောင် တယ်။ ကော်ဖီသောက် စကားတွေပြောကြပေါ့။တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ဘော်ဒါ ကဏ္ဍဆွဲဆောင်မှုရှိကြပေမဲ့ ကျွန်တော် ဟာ သူ့အတွက် ချစ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဆွဲဆောင်မှုတော့ ရှိမယ် မထင်။ ညတွေတိုင်း ရယ်မော အော်ဟစ်ရင်း သူ့ကိုဖက်တယ်၊ သူ့အိပ်ယာမှာလှဲတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဒီထက်ပိုပြီး ထူးတဲ့ကိစ္စ မလုပ် မနှောင့်ယှက်ဘဲ နှစ်ဦးကြား ဆက်ဆံ ရေးကောင်းဖို့သာ ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါရဲ့။
Science class ပြီးလို့ပြန်လာတဲ့ ကျွန်တော် သောကြာနေ့ ညနေခင်းအဆောင်ပြန်ရောက်တော့ စားပွဲပေါ်မှာ note တစ်ခု ရေးထားတဲ့ စာရွက်လေးကိုတွေ့ရပါတယ်။ ခပ်သော့သော့ လက်ရေးနှင့်အတူ အောက်ခြေမှာ သူ့နာမည်ကိုရေးထားပါ၏။ 'Meet me by my car' စာအုပ်တွေ၊ ကျောပိုးအိတ်တွေ အသာ ထားခဲ့ပြီးလမ်းလျှောက်ကာ ကားပါကင်ရှိရာသွားလျက် ကားကို ရှာတော့ ထောင့်ချိုးနားက ပြိုင် ကားလေးပေါ်မှာ ညီညီရယ် လေ။ သူရှိရာကို လက်လှမ်းပြပြီး'Hey!' လို့ အသံပြုမိရုံရှိသေး ကားကာ ကျွန်တော့်နားရောက်လာကာ တံခါးကိုဖွင့်ကာ 'Get in the car' တဲ့။
သူ့မျက်နှာကို ကြည့်ရတာ ၀မ်းနည်းကြေကွဲနေတဲ့ အသွင် အပြင်။ ဘာများမှားမိလို့လည်း ကျွန်တော်မသိ။ ဒါပေမဲ့ ဘာ မေးခွန်းမှ မဟုတ် ဘဲ ကားထဲဝင်လိုက်ပါတယ်။ ကားကို ကွေ့ ထွက်လိုက်ကာ လမ်းမတစ်လျှောက်မောင်းနေလိုက်တာ ဘာ စကားမှမဆိုဘဲ။ နာရီဝက်ကျော် ကြာ တိတ်ဆိတ်နေတော့ ကျွန်တော်ကပဲ တိတ်ဆိတ်မှုကို ဖြိုခွင်းရတော့တာပ။ 'ဘာဖြစ် နေတာလည်း ညီညီ?' ကျွန်တော် စိုးရိမ်စွာ မေးမိ ပါတယ်။
စိတ်ထဲရင်ထဲက အရင်းနှီးဆုံး ချစ်ခင်ခင်မင်ရသော သူတစ် ယောက် အခု နာကျင်မှုတွေနဲ့ ခံစားနေရပါလား။ သူ့ပခုံးကို ကျွန်တော်သိမ်း ဖက်လိုက်ကာ နှစ်သိမ့်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ ဘာ စကားမှ မပြောဖြစ်။ နှစ်ဦးသားတိတ်ဆိတ်နေကြပြီးနောက် အဆောင်ကိုပဲပြန်လာဖြစ်ကြပါ တယ်။ သူကတော့ အိပ်ယာ ဆီတန်းသွားပြီး ခြေပစ်လက်ပစ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျောင်း စာနည်းနည်း လုပ်ဖြစ်ပါသေးရဲ့။
အချိန်တိုင်းလိုလို ညီညီ့ကို မသိမသာကြည့်မိတော့ ရှိုက်သံ သဲ့သဲ့ကြားနေရတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူအိပ်ပျော်နေပြီ။ ဘယ်လိုမှ မရပ်တည်နိုင် တော့မှ စာကြည့်ရာမှ ထကာ အိပ်ယာဆီ ကျွန်တော်လှမ်းဖြစ်ပါရဲ့။ တစ်ခါမှ မခံစားခဲ့ဖူးတဲ့ အာရုံအထိ အတွေ့ကြောင့် ညလယ်လောက် မှာ ကျွန်တော်နိုးလာတယ်။ ကျွန်တော့်ရင်အုပ်ပိုင်းဆီမှာ တစ်ခုခု.....ဘေးကိုလှည့်ကြည့် တော့ ညီညီ ကျွန်တော့်ဘေးမှာ လာအိပ်ရင်း သူ့ လက်မောင်း များဖြင့် ဖက်ထားခြင်းပါ။ ကျွန်တော်သူ့ဘက်ကို စောင်းလှဲ့ လိုက်ပြီး မျက်နှာလေးကို လက်ချောင်းလေးများဖြင့် ငြင်ငြင်သာ သာ လှုပ်နှိုးမိပါရဲ့။
သူ နိုးထလာခြင်းက ကျွန်တော့်ရင်ထဲ ဘာမှန်းမသိခံစားရသလို အသက်ပြင်းစွာ ရှူမိရပါတယ်။ သူ့မျက်နှာဟာ ကျွန်တော့်ဆီ တိမ်းညွှတ် လာပြီး အနမ်းများချွေပါရော။ နှုတ်ခမ်းများဟာ ပူနွေးစွာ ရင်တွေ တဆတ်ဆတ်ခုန်လာရင်း ဒီရေအလား ခံစား မှုတွေ မြင့်တက်လာရကာ ကျွန်တော်တို့ တက်မက်စွာနမ်း ဖြစ်ကြပါပြီ။ ကျွန်တော့်လက်များဟာ သူ့ရင်အုပ်လေးတွေကို ပွတ်သပ်နေမိတာကလွဲလို့ တခြားဒီထက် မပိုဖြစ်ရပါ။
ညီညီလေ ကျွန်တော့်ကို ပက်လက်လှဲစေလိုက်ရင်း အပေါ်က နေအုပ်မိုးကာ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းနှင်းဆီဖူးကို သူ့နှုတ်ခမ်းထူထူ များဖြင့် နမ်း ရှိုက်သည်သာမက လည်တိုင်များဆီပါ အနမ်းချွေ တာ။ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး လွင့်မျောတိမ်တိုက်ဖြစ်နေသလို ကြက်သီးများလည်း ထ မိပါရဲ့။ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်စွာ လှဲလျောင်း ရင်း မျက်လုံးများကတော့ သူ့မျက်နှာရွှေလမင်းက အကြည့်မ ပြောင်း။ သူ....သူ ဘာလုပ်သလဲသိ လား? သူ့တီရှပ်ကို ဆွဲ ချွတ်လိုက်တယ်၊ သူ့ Levi' 501ကိုကြယ်သီးတစ်လုံးချင်းဖြုတ် တယ်၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး ဆက်ပြီး တော့ အနမ်း ချွေတယ်လေ။ ကျွန်တော့်အသက်ရှူသံတွေ တုန်ခါနေသလို ဖြစ်နေရတာ သူ အင်္ကျီကိုဆွဲချွတ်ပေးတော့ ပိုပြီးဆိုးပေါ့။
ကျွန်တော့်မျက်နှာဆီမော့ကြည့်တော့ ခေါင်းငြိမ့်ပြမိတာနဲ့ ညီညီ ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီကို အသာချွတ်တယ် အောက်ကို ဆွဲချ လိုက်ရင်း ပေါ့။ သူ့ဂျင်းဘောင်းဘီကိုလည်း ဆွဲချွတ်ကာ အဝေး ကိုရောက်စေရော။ နှစ်ယောက်သား boxer ဘောင်းဘီတိုလေး များဖြင့် ရင်ခုန်သံ ဆူညံစွာ အကြည့်တွေဖလှယ် လက်ကလေး တွေ ဟိုသည်ရွေ့လျားဖြစ်ကြပါ၏။ တစ်ယောက်ကို တစ် ယောက် ကြည့်ရင်း ပိုပို နှစ်သက် မြတ်နိုးလာမိသလို ကျွန်တော် ကတော့ ချစ်မိသွားပြီ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကြောက်မိပါရဲ့ ဘာ ဖြစ်မလည်းဆိုတာကိုလေ။ ဘယ်ယောက်ျား လေးတစ်ယောက် နှင့်မှ ကျွန်တော် လိင်မဆက်ဆံမပတ်သက်ခဲ့ဖူးဘူး။ ကိုယ့် ဖာသာကိုယ် ဘာလုပ်မိနေမှန်း မသိ မျောနေမိတယ် ညီညီ့ အနမ်းတွေ ကျွန်တော့်ဗိုက်သားများမှ တစ်ဆင့် ပေါင်ခြံဆီရွေ့ လျားသွားချိန်မှာလေ။ သူ့လက်အစုံဟာ boxer ဘောင်းဘီ မျှော့ကြိုးကို အသာဆွဲချလိုက်တော့ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ ဆတ် ကနဲ ငေါက်တောက်ပေါ်လာပါရော။အလျားအနံ ဒင်ပြည့် ကျပ် ပြည့် ပစ္စည်းကို သူလက် လက်တောက်နေသည့် မျက်ဝန်းများ ဖြင့်သေချာကြည့်ကာ ခေါင်းကို အသာငုံ့ နှုတ်ခမ်းများဖြင့် တို့ ထိလျက် တဖြည်းဖြည်း ကွမ်းသီးခေါင်း မှတစ်ဆင့် လိင်တံတစ် ၀က်အထိ အာခံတွင်းထဲ စုပ်ငုံကာ ပြုစုပါတော့တယ်။
ဒီခံစားချက်မျိုး ဘယ်တုန်းကမှ မရရှိခဲ့ဖူးပါ။ တစ်ကိုယ်လုံး သွေး တွေဆူပွက်ပြီး တဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်လာရသလိုမျိုး ခံစားရပါတယ်။ ကျွန်တော့် စိတ်တွေ အရမ်းလှုပ်ရှားလာရတာ သူ့ရဲ့ပူနွေးနေတဲ့ ခံတွင်းထဲ ကျွန်တော့်ညီဘွား အ၀င်အထွက်ခပ်သွက်သွက်လေး ဖြစ်ရစဉ်မှာပေါ့။ အိုး.....မြောက်သွားတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုပေးတဲ့ သည်ဖီလင်မျိုး ဘယ်တော့မှ မရပ်တန့်စေချင်မိပါဘူး။ ခဏ သော အချိန်မှာ သူကျွန်တော့် အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ် လိုက်သလို သူ့အတွင်းခံကိုလည်း ဖယ်ရှားလိုက်ရာမှာ လှပ ထွားကျိုင်းတဲ့ လျှို့ဝှက်ပစ္စည်းကို မမာ့တမာ ကျွန်တော်တွေ့ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ညာလက်နှင့် အသာဆုပ်ကိုင် -ွင်းထုရင်း မာ အောင်သူကြိုးစားတော့ ပစ္စည်းက မတ်သထက်မတ်လာရင်း မျက်လုံးပြူးချင်စရာကောင်းအောင်ရှည်ထွက်လာပါရော။ ကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေကို လေထဲမြောက်အောင် သူမပြီး ကျွန်တော့်ခရေ၀ ကို သူလေ့လာတယ်။
ကျွန်တော့်မျက်နှာကို ဆက်လုပ်ရမလား? ခွင့်တောင်းဟန် တစ် ချက်ကြည့်ပြန်တော့ မငြင်းဆန်နိုင်စွာ ခေါင်းငြိမ့်ပြမိပါပြီ။ ခြေနှစ် ချောင်းကို သူ့ပခုံးပေါ်ထမ်းတင်လိုက်ရင်း လေထဲမြောက်လာ တဲ့ တင်ပါးတွေကို အသာဖြဲကာ ဒစ်ထိပ်ပိုင်းကို ခရေ၀ဆီတိုး ဝှေ့ပြီး တစ်ထစ်ခြင်း ဖိသွင်းပါရဲ့။ နာကျင်ပေမဲ့ ချောဆီညှစ် ထည့်လိုက်တော့ အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ တင်ပါးဆုံကိုကိုင်ရင်း ဆောင့်လိုက်တဲ့ သူ့ပစ္စည်း ကျွန်တော့်ခရေတွင်းထဲက ဘာကို သွားသွားထိသည်မသိ လှိုက်ကနဲ လှိုက်ကနဲ ဆီးသွားချင် သလိုဖြင့် တရှိန်ရှိန် ခံစားမှုအဟုန်မြင့် လာပါ၏။ ညီညီဘယ်လို များလုပ်သလဲ? နာကျင်မှုကိုမေ့လျော့ကာ သူ့လှုပ်ရှားမှုဆောင့် ချက်များမှာ မျောပါရတာ။ နောက်ဆုံးကြာရှည် မထိန်းနိုင်ဘဲ ပူ နွေးနေတဲ့ အရည်ပျစ်များ ညီညီ့ဗိုက်သားဆီ ဖြန်းပက်မိပါတယ်။ သူလည်းပဲ အသွင်းအထုတ် ခပ်သွက်သွက်လုပ်ရင်း ကွမ်းသီး ခေါင်းထိ အပြင်ထုတ်လိုက်ကာ ဥဖြင့်တင်သားတွေ ထိကပ်တဲ့ အထိ နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြန်ဖိသွင်းလိုက်ရင်း ချောကလက် ရည်ပူများကို ပန်းထည့်ပါတော့တယ်။ တစ်စက်ကျန်တဲ့အထိ သူဖိကပ်ထားရင်း ခဏနေတော့ ဆွဲထုတ်လိုက်ကာ ကျွန်တော့် ဘေးမှာ လှဲအိပ်လိုက်ပါတော့တယ်။ နှစ်ဦးသားတစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ဖက်ကာ အိပ်မောကျသွားရတာ။ အိပ်မောမကျ ခင်နောက်ဆုံးအတွေး ကတော့ 'ဒီလူနဲ့ အမြဲအတူနေသွား ချင်ရဲ့' လို့တောင့်တစိတ်အတွေးလေး ပါပဲ။
မနက်ခင်းအိပ်ယာနိုးတော့ ကျွန်တော့်နံဘေးကိုလှည့်လိုက်တာ ဟာတာတာ၊ ခုတင်ဘေးစားပွဲပေါ် ပြောစကားလေးတွေရေးမှတ် ထား ခဲ့တတ်တဲ့ စာရွက်လေးရှိနေလား.....နတ္ထိ။ ဟိုသည် လှည့် ကြည့်ရင်း ခေါင်းကိုငဲ့လိုက်ချိန် နေရောင်ခြည်ကြောင့်မျက်စိ ကျိန်းသွားရကာ လက်ဖြင့်ကာပြီး ကြည့်မိပေါ့။ ကျွန်တော် အိပ်ယာပေါ်ပြန်လှဲလျောင်းလိုက်ရင်း မနေ့ညကဘာတွေဖြစ်ခဲ့ တယ်ဆိုတာ ခေါင်းထဲ တရိပ် ရိပ်ပြန်လည်မြင်ယောင်လာမိပေါ့။
ကျွန်တော်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ပြုံးရပါပြီ။ သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့ လမ်း သွယ်လေးမှတစ်ဆင့် အခြားတစ်ဖက်ကို ဖြတ်သန်းသွားမိတာ ပြန်ပြီး နောက်ပြန်မလှည့်ချင်တော့ပါဘူး။
အိပ်ယာကအသာထ အဆောင်ရေချိုးခန်းဆီလှမ်းလာကာ ခန္ဓာ ကိုယ်ပေါ်စီးဆင်းလာတဲ့ ရေများနှင့်အတူ စိတ်ထဲမှာညစ်ညူးနေ တဲ့ အတွေးတွေကို အဝေးနှင်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ငနဲအုပ်စုတစ်ခု ရေချိုးခန်းထဲဝင်လာတာကြောင့် ရေချိုးတာကို လက်စသတ်ကာ အ၀တ်လဲ လိုက်ပါရဲ့။ ထောင်သောင်းများစွာသောအတွေးတွေ ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲ ပြေးလွှားသွားရင်း သူတို့တွေနှင့်ကျွန်တော် ဘာကွာခြားသွား မှန်းမသိ ကွာခြားသွားတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှုမျိုး ရရှိလာကာ မနေ့ညကလို အဖြစ်မျိုး မဖြစ်သင့်.....
ကျွန်တော့်လက်မောင်းကို တစ်ယောက်က ရုတ်တရက်ဆွဲ ကိုင်ပြီးခြုပ်လိုက်တာကြောင့် မလှုပ်မရှားနိုင်တော့။ ဘာဖြစ်တာလည်း ကျွန်တော် မသိပေမဲ့ ဒါဟာ.....ဒါဟာ ကောင်းဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒီအချိန်မှာ နောက်တစ်ယောက် ဟာ လှမ်းလာပြီး ကြီးမားတဲ့ လက်သီးဆုပ်နှင့် ကျွန်တော့် မျက်နှာကို ထိုးနှက်လိုက်ပါရော။ ကျွန်တော် တစ်ယောက် ယောက်ကို အကူအညီတောင်းဖို့ ကြိုးစားစဉ်မှာပဲ ကျွန်တော့် အရှိုက်၊ ပြီးတော့ ပေါင်ခြံကို ထပ်မံ ထိုးနှက်ကန်ကျောက်မှုတွေ ခါးသက်စွာရရှိလိုက်ပါရော့။ ကြမ်းပြင်ပေါ် ဒူးညွတ်ကျသွားရင်း လက်သီးနဲ့ထိုးသူကို ဘာကြောင့် ဒီလိုလုပ်ရတာလည်း ကျွန်တော်မေးမိပါတယ်။
'မင်းတို့တွေ ဘာကြောင့် ငါ့ကိုထိုးရတာလဲ? ဘာဖြစ်တာ လည်းကွ?'
စိတ်အလျဉ်ဟာ ညီညီ့ဆီကို ပြေးသွားကာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ ဖြစ် ရပါပကော။ သူရော ဒီလိုပဲ အထိုးအနှက်ခံရပြီလား? သူသာ ဆိုရင် ပြဿနာဖြစ်ပြီလေ။ အားကစားအသင်းအဖွဲ့တွေကနေ ဘော်ဒါ အပေါင်းအသင်းတွေကနေ ဖဲကျဉ်ခံရမည်လား?
ကျွန်တော့် ကမ္ဘာလေး အဆုံးသတ်ပြိုကွဲသွားသလိုခံစားရပါ တယ်။ အသည်းတွေ ကြေမွသွားပြီးထင်ပါရဲ့။ ချစ်ရတဲ့ ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့ သူတစ်ယောက်က နာကျင်မှုတွေပေးစွမ်း သလား? အရာအားလုံးမျှတမှုမရှိဘူးလို့ ခံစားရတယ်။ သူ့အိပ် ယာမှ ကျွန်တော့်ကို နှိုးခဲ့ရတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီကိစ္စကိုလည်း ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တာမဟုတ်သလို လိင်ဆက်ဆံဖို့ကိုလည်း သူပဲဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာလေ။
ကြမ်းပြင်ပေါ်လဲနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကိုထားပြီး ထွက်သွားကြ တယ်။ ဖြေးညှင်းစွာထပြီးနောက် တဘက်တွေ ဆပ်ပြာခွက်တွေ ကောက်ယူပြီး အခန်းရှိရာကို ကျွန်တော်အပြေးနှင်လာခဲ့ပါရဲ့။ တစ်ကိုယ်လုံး အတွင်းကြေသလို ခံစားရတာကြောင့် ဆေးရုံ သွားပြဖို့ ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ် လိုက်ပါတယ်။ ညာဘက်မေးရိုး ဆီကလည်း နာကျင်မှုကို ခံစားရပါ၏။ notepad ကစာရွက် တစ်ရွက် ယူလိုက်ကာ ညီညီအတွက် စာတစ် ကြောင်းရေးရင်း စားပွဲခုံပေါ် ဖန်တုံးနှင့် ဖိထားခဲ့သည်။
သူဘယ်အချိန်ပြန်လာမယ် ကျွန်တော်မသိဘူး။ သူဘာတွေဖြစ် စေချင်ခဲ့တယ် ထိုးနှက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေက ဘယ်သူတွေ ဆိုတာ သိဖို့ စုံစမ်းပြီးသေချာဆုံးဖြတ်ရမယ် 'ဘာလုပ်ရမလဲ ရှေ့ဆက်ပြီး?'ဆေးရုံရောက်တော့ သူတို့ပြောတာက မေးကွဲ သွားတာချုပ်ရမယ်တဲ့။ ဒယ်ဒီ တို့ဆီ ဖုန်းဆက်အကြောင်း ကြားလိုက်တယ် သား ချော်လဲပြီး ထိခိုက်မိတာ စိုးရိမ်ဖို့မလို ဘူးဆိုတာကိုရော။ မာမီက ပိုက်ဆံနည်းနည်း လွှဲလိုက် မည်ပေါ့။
ကျွန်တော့်ဘ၀ဟာ အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သလို ကျွန်တော့် စိတ်ဟာလည်း အနာတရဖြစ်သွားခဲ့ရပါပြီ။ 'ငါဒီလို အစော်ကားခံ ထိုးနှက်ခံရတာ နောက်တစ်ကြိမ်မဖြစ်စေရဘူး' 'ငါဘယ်တော့မှ အချစ်မှာကျဆုံးမခံတော့ဘူး' နှစ်ဦးသားကြား အဖုအထစ်ဖြစ်ရမယ်လို့ မတွေးယူခဲ့ဖူးသလို ကျွန်တော်တို့ နှစ်ဦးသားချစ်ချစ်ခင်ခင်နှင့် အမြဲနေထိုင်သွားရမယ်လို့ထင်မြင် ခဲ့တာ။ အခုတော့ ဘာများဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့် အဲဒီ့အတွေးတွေ။ အဆောင်အခန်းထဲ ပြန်ရောက်တော့ စာကြည့်စားပွဲပေါ်မှာ note ကလေးတစ်ခု စာရွက်ပေါ်မှာရေးထားရဲ့'Sorry'
သက်ပြင်းအခါခါ ချမိရရင်း အိပ်ယာပေါ်ဝုန်းကနဲ ပစ်လှဲ လိုက် ပါရဲ့။ အရှိုက်ကိုနောက်တစ်ကြိမ် လက်သီးနှင့် အထိုးခံရသလို ခံစားနေရ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါက ကောင်းတဲ့အရာတွေကို ခံစားမိနေခြင်း။ မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်သေးသေးလေးများ ပါပဲ။ သူကျွန်တော့်ကို ဂရု တစိုက်ရှိတုန်းဆိုနိုင်သလို ခံစား ချက်များ မသုဉ်းသေးဘူးဆိုတာ။ အိပ်ယာက နိုးထလာတော့ သူအလန့်တကြားဖြစ်ရင်း သူ့သူငယ်ချင်း တွေကို ပြောပြမိ တာဖြစ်မှာ။ ကျွန်တော်နှင့် လိင်ဆက်ဆံမိဖို့ဆိုတာလည်း ရည်ရွယ်ဟန်မတူဘူးဖြစ်မှာပါ။ နောင်တအပြည့်နှင့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ ခြင်းထင်ရဲ့။ အဲဒီ 'ဖြစ်နိုင်တယ်'ဆိုတာတွေကို ယုံကြည်နေဖို့ အချိန်နည်းနည်းတော့ ယူရမှာပေါ့လေ။
စိတ်တွေကြည်လင်ဖို့ လတ်တလောဖြစ်ပျက်နေတာတွေက ရုန်းထွက်ဖို့ တက္ကသိုလ် campus park ဆီခြေကျင်လျှောက် ရင်း လေအေး အေးတွေကို ရှူရှိုက်လိုက်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်စ တက်ခါစက အချိန်တွေကို လွမ်းမိပါရဲ့။ မ၀ံ့မရဲဖြစ်နေတတ်တဲ့ ကျွန်တော့်ကို ကူညီတတ် တဲ့ ညီညီ၊ စိတ်ကူးထဲမှာ ချစ်ခင်ရင်း နှီးစွာ နေချင်တဲ့စိတ်တွေ ဖြစ်ထွန်းလာအောင် စွမ်းတဲ့ ညီညီ့ကို ပြန်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်လေ။
အချိန်အတော်ကြာ ငေးနေရင်း အဆောင်ကို ပြန်ဖို့ ကျွန်တော် ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အခန်းတံခါးကို ဖွင့်လိုက်တော့ ကျွန်တော်မမျှော်လင့် ထားတဲ့ တစ်စုံတရာကို တွေ့လိုက်ရပေါ့။ ညီညီ အိပ်ယာမှာ လှဲနေရင်း ကျွန်တော်ဝင်အလာကို ကြည့်နေ ပါ။ ကျွန်တော်အခန်း ပတ် ၀န်းကျင်ကို တစ်ချက်လှည့်ကြည့် ကာ အခန်းတံခါးဆီနောက်ပြန်လှဲ့ရင်း ကန့်လန့်ထိုးပိတ်လိုက် ပါတယ်။ ပြီးတော့ ညီညီဆီ အကြည့် ပြန်ရွှေ့ဖြစ်ပါသည်။ ညီညီ ....ညီညီ့ မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်တွေ။ ကျွန်တော် ထပ်ပြီးတော့. ......ထပ်ပြီးတင်းမထားနိုင်တော့ပါဘူး။ ညီညီ့ဆီ အမြန်သွား ကာ လက်မောင်းများဖြင့် ပွေ့ဖက်မိပါပြီ။
မျက်ရည်တွေ အဆက်မပြတ်ကျရင်း တောင်းပန်စကားဆိုလေ တော့ ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားမှလည်း အလိုလို ကျေနပ်တဲ့စကား ထွက်သွား ဖြစ်ပါ၏။
'ငါ...ငါ ကြောက်လန့်စိတ်တွေဖြစ်ပြီး ဘာလုပ်မိမှန်းမသိတော့ ဘူး။ သူတို့မင်းကို ထိုးနှက်တာတွေ မလုပ်စေချင်ပေမဲ့ ငါမတား နိုင်ခဲ့ဘူး'
ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းမှာလည်း မျက်ရည်စတွေခိုတွယ်ခဲ့ရပြီ။ ညီညီ့ကို တင်းကြပ်စွာဖက်တွယ်ရင်းပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ သူ့ အိပ်ယာပေါ်လှဲလိုက်ရင်း မျက်နှာခြင်းဆိုင် ငြိမ်သက်နေမိကြ ပါတယ်။
သူ့လက်အစုံဟာ ကျွန်တော့်လက်မောင်းသားများကို ငြင်သာ စွာပွတ်သပ်နေပြီး ခဏအကြာမှာတော့ သူ့စိတ်တွေ မချုပ် တည်းနိုင်တော့ ဟန်ဖြင့် ရင်အုပ်ဆီကို စတင်ပွတ်သပ်ပါရော။
ဘေးတစောင်းလှဲနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ပက်လက်ဖြစ်စေပြီး နောက် သူကျွန်တော့်ပေါ်ကို တက်ခွပြီးထိုင်တယ်။ နောက်ပြီး သူနှင့်အတူ အားကစားလိုက်လုပ်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်ရင်အုပ်ထူ ထူပေါ်က နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို နှုတ်ခမ်းအစုံဖြင့် ခပ်ရွရွပွတ် သပ်တာ တမေ့တမော။ မြင်းစီးသည့်အလား ခွထားတာဆို တော့ တင်ပါးအိအိတွေဟာ ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံကိုဖိကပ်ထားတဲ့ အတွက် ညီဘွားကို တဖြည်းဖြည်း ကောင်းကင်ကို ပစ်လွှတ် မယ့် ဒုံးပျံဖြစ်စေသည်။ သူ့ T-shirt ကိုဆွဲချွတ်ပြတော့ ကျွန်တော်လည်း အလိုက်တသိ လက်ချောင်းလေး တွေနှင့် ခပ်ဖွဖွမမှီ့တမှီ။ သူ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို မာပြီးတောင့် စေလိုက်တယ်။
မိနစ်အနည်းငယ်ကြာအောင် မိန်းမောနေကြပြီးနောက် သူ ကျွန်တော့်ပေါ်ကနေ ဖယ်ကာ ၀တ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီက ကြယ်သီးတွေကို တစ်လုံးခြင်းဖြုတ်၊ ဇစ်ကိုခပ်ဖြေးဖြေး ဆွဲဟ ပေးတာ တပ်မက်စွာ။ ဂျင်းဘောင်းဘီကို ခါးနေရာကကိုင် အောက်ကိုဆွဲချွတ်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်ညီဘွားဟာ မိုးပေါ် သို့ boxer ဘောင်းဘီထဲမှ ချိန်ရွယ်လျက်။ လည်ချောင်းထဲမှာ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် မျိုချရခက်နေတဲ့ တံတွေးများကို အသာ မျိုချလိုက်ရင်း သူဘာဆက်လုပ်မလည်း ကျွန်တော် ငံ့လင့်နေ မိပါရဲ့။
ဒီတော့လည်း ခေါင်းကို ခပ်သွက်သွက်ငြိမ့်ပြလိုက်တာ ကျွန်တော် ပုတ်သင်ညိုဖြစ်သွားတယ်။ သူ ကျွန်တော့် ဦးခေါင်း နား ကားယားခွ လိုက်ကာ ပေါင်ခြံကို နီးကပ်စေသလို ကျွန်တော့်ညီဘွားကိုလည်း သူမျက်နှာမူလိုက်ပါရဲ့။ သူ့ ဘောင်းဘီက ကြယ်သီးတွေကို ကျွန်တော် ဖြုတ်ပေးနေချိန်မှာ တော့ သူ့နှုတ်ခမ်းများမှတစ်ဆင့် ပူနွေးနေတဲ့ အာခံတွင်းထဲ ထည့်ကာ အလုပ်စတင်နေပါပြီ။ ခပ်ထွားထွားငပဲကို ကျွန်တော့် ပါးစပ်ထဲ အလျင်စလိုထည့်မိတော့ သူ့ကွမ်းသီးခေါင်းဟာ သွား နှင့်နည်းနည်းထိမိသေးတယ်။ ဒါကပဲ သူ့ကိုဖီးလ်တက်စေ သ လားမသိ။သူ့ငပဲ ပါးစပ်ထဲသွင်းတာ အဆင်ပြေဖို့ ကျွန်တော် အနေအထားနည်းနည်း ပြင်လိုက်ရာ ညီညီက သူ့တင်ပါးများ ကို နောက် နည်းနည်း ဆုတ်လိုက်ရင်း ဖိသွင်းလိုက်တာ လည် ချောင်းထဲကိုရောက်ရာ။ ညီညီ့ပစ္စည်းက အတော်ထွားတာပါ။ ပထမဆုံးသော Oral sex အတွေ့ အကြုံဆိုတော့ မကျွမ်းကျင် ပေမဲ့ သူကျေနပ်အောင်တော့ ကျွန်တော်ကြိုးစားဖြစ်ပါတယ်။
လည်ချောင်းထဲ တိုးတိုးဝင်လာတဲ့ ပစ္စည်းရဲ့အရသာကြောင့် ရော သူ့လျှာဖျားရဲ့ အဝေ့အ၀ိုက်နှုတ်ခမ်းများရဲ့ နုညံ့မှုတို့ ကြောင့် ကျွန်တော် သိပ်မထိန်းနိုင်တော့ပါ။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်က ညည်းတွားသံတွေ ကျယ်လောင်လာရကာ တစ်ကိုယ်လုံး တ ဆတ်ဆတ်တုန်ရင်း ညီညီ့ပါးစပ် တွင်းကို အားရစွာပန်းထည့်ပစ် လိုက်ပါတယ်။ သူလုံးဝမလွှတ်သေးဘဲ ဆက်ပြီး တပြွတ်ပြွတ် စုပ်နေတာ လုံးဝပျော့သွားသည်အထိ။ သုံး လေးစက္ကန့်အကြာ မှာတော့ ပါးစပ်တွင်းက သူ့ပစ္စည်းက ပိုပြီးကြီးလာသလို ထင်ရ ကာ လည်မျိုထဲဖိသွင်းလိုက်ရင်း သူလည်းပဲ ချောကလက်ရည် တွေ ပန်းထည့်လိုက်ပါရော။
sixty-nine အနေအထားအတိုင်း နှစ်ဦးသား အိပ်ယာပေါ်မှာ အ တန်ကြာလှဲလျောင်းနေပြီးနောက် သူကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲ တိုး ၀င်လာပြီး ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဖက် အသက်မှန်မှန်ရှူရှိုက်ကာ ငြိမ်သက်စွာ အိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သူ့ဆံနွယ်လေးတွေ ပွတ်သပ်ပေးနေရင်း ပါးတစ်ဖက်က နာ ကျင်မှုကိုလည်း သတိရမိရင်း အိပ်မပျော်နိုင်သေးပါ။
ညီညီ သူနဲ့ ဒီလိုနေရချိန် ခဏလေးဟာ ကျွန်တော့်အတွက် ပြည့်စုံမှုဆိုတာကို ခံစားရတဲ့ အချိန်လေးရယ်ပါ။ ဘယ်အရာ တွေကမှ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ သွားတဲ့ခရီးကို ရပ်တန့် ဖို့ မတတ်နိုင်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ခံစားမိခဲ့သလို ကျွန်တော်ဘယ် တော့မှလည်း မရပ်တန့်ချင်ပါ။
ညတစ်နာရီထိုးပြီ.....မနက်စောစောထရဦးမှာဆိုတာ့ အိပ်ရဦး မှာပါ။ မင်းကိုကိုယ်ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါပြီ ချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်။
Alex Aung (26/7/2010)
Note: အပျင်းပြေဖတ်ဖို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာ ၀တ္ထုအသစ်တင်ပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
Posted by Alex Aung at 12:38 PM No comments:
Myanmar Rainbow Apps (ဆန္ဒဖြည့်ဖို့ လူလိုတဲ့အခါ)
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ကျနော့် Blog မှာ Offer ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းပဲဖြစ်ဖြစ် အခြားအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ် တင်လေ့မရှိပါဘူး။ ညစ်ညမ်း Blog တစ်ခုအသွင်ဖြစ်သွားမှာစိုးရိမ်လို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျနော့်အသိ ဘော်ဒါတွေက နားညည်းလောက်အောင်လာလာဂျီကျနေတတ်တာကြောင့်ဟိုသည်မွှေကြည့်ရာမှာ နည်းပညာနားလည်တဲ့ ဂေးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဒီ Apps ကိုဝေမျှတာကြောင့် ကျနော်ကလည်းပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Homo 18+ တွေကြည့်ချင်သူတွေရယ် Offer လုပ်ချင်တဲ့သူတွေ Offer ခေါ်ချင်တဲ့သူတွေရယ် အဆင်ပြေအောင် App လုပ်ထားပါတယ်။ အရင် Version ကို ထပ်ပြင်ထားပါတယ်။ အောက်က အဆင်ပြေတဲ့ Link မှာ Down နိုင်ပါတယ်။ သဘောကျကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Android - https://goo.gl/MkZbpO
iOS - https://goo.gl/x1ud7L
Android - https://goo.gl/EGIODY
iOS - https://goo.gl/f6eM2O
Android - http://www.mediafire.com/download/zckfi2nzf5midj2/Myanmar+Rainbow+App.apk
iOS - http://goo.gl/JQa0sl
Posted by Alex Aung at 3:49 PM 1 comment: